Colorado ONWE mmerụ ọkàiwu | Los Angeles Personal mmerụ Lawyer,houston personal injury lawyer
Home » Onye ọkikpe ọrụ » Colorado ONWE mmerụ ọkàiwu
Car Ihe ọghọm
Na Colorado onye mmerụ ọkàiwu, i nwere ike na-ekwu na onye mmerụ na-ekwu ma ọ bụrụ na ị anọgidewo unan si ụgbọ ala accidents.You nke pụrụ ikwu na emebi obosara maka mmerụ nakwa dị ka ọnwụ nke ego nakwa dị ka ọnwụ nke ohere maka oru dị ka a n'ihi ihe mberede ụgbọ ala.
Moto unan nwere ike ọ bụghị mgbe niile isi ndị; ụfọdụ naanị ata ahụhụ, he na bruises. mgbe ụfọdụ, ezie na, ha bụ ka njọ dị ka mkpọnwụ na-aghọ comatose. Nke ikpeazụ nwere ike ohere na-emeri ikpe, ma ndị nke mbụ nwere ike inwe ị kwesịrị ekwesị akwụ ụgwọ.
Truck Ihe ọghọm
E nwere bụghị ihe nile na ọtụtụ ihe mberede ebe gwongworo bụ ndị na-ata ahụhụ na ọdụm òkè nke unan. Ndị na obere na obere ugbo ala nke na enweela ihe mberede na ọtụtụ ibu gwongworo bụ ndị na-ata ahụhụ dị oké njọ unan na ọbụna ọnwụ.
Emetụtaghị okwu ikpe nke a ọdịdị agbasaghị ịdọrọ tinyere n'ihi na nke ogologo nnyocha na-enwe ka a mere (karịsịa ma ọ bụrụ na gwongworo bụ nke a azụmahịa ọdịdị). Otú ọ dị, ma ọ bụrụ na-anya gwongworo na-gosiri na ya ka ụta dịịrị, ndị ikpe ga-aga na aja ụzọ.
Motorcycle Ihe ọghọm
Kasị ọgba tum tum ihe mberede ndị na-emekarị na ụgbọala. Ndị a ihe mberede ejikari-ahụ na ọgba tum tum na-agba ịlụ merụrụ ahụ. Na ndị a na ụdị ihe mberede, ọkwọ ụgbọala na-ejikarị atụba n'ihi na ha na-emekarị wetara n'ihu ọgba tum tum.
Ọ dabara nke ọma, ọtụtụ n'ime ndị a ihe mberede na-adịghị niile kwa na-egbu egbu n'ihi na onye na-agba.
Ọ dị mkpa ka ndị e dinara ụdị ihe mberede ichọ ruzuru onye mmerụ ọkàiwu dị ka ngwa ngwa dị ka o kwere ka e wee hụ mma akwụ ụgwọ na-natara. The ọkàiwu kwesịrị ịdị na-enwe ike igosi kar ir doro anya na onye na-akwọ na-ahụ maka ihe mberede.
Ihe dị iche iche Ihe ọghọm
Ndị a na-adịghị na-agụnye Motoring. Ndị a bụ ihe mberede nwere ike ime n'ebe ọ bụla. Ha nwere ike ịbụ na pedestrians n'okporo ụzọ, ha nwere ike na-arụ ọrụ na a ewu ihe owuwu, etc. mgbe ụfọdụ, -arụrụ ọrụ bụ maka onye ọchịchị nchịgbu n'ihi ejighị ihe kpọrọ ihe ilebara a ụfọdụ nke, dị ka a ezighị ezi mbuli, nke nwere ike mgbe iduga unan ma ọ bụ ọnwụ. N'okwu a, tara na-eguzo a mma ohere nke na-ekwu na ụgwọ ma ọ bụrụ na ha na-arụ ọrụ na a ọma Colorado onye mmerụ ọkàiwu.